Taona iraisam-pirenena momba ny jono sy ny fiompiana trondro
Ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana dia nanambara ny taona 2022 ho Taona Iraisam-pirenena ho an'ny jono sy ny fiompiana trondro artisanal (IYAFA 2022).
Ny IYAFA 2022 dia mikendry ny hampifantoka ny sain'izao tontolo izao amin'ny anjara asan'ny jono madinika, ny mpiompy trondro ary ny mpiasan'ny trondro eo amin'ny fiarovana ara-tsakafo, ny sakafo, ny famongorana ny fahantrana ary ny fampiasana ny harena voajanahary maharitra.
Ny Drafitr'asa Maneran-tany IYAFA dia narafitra manodidina ny andry fito:
Manana finiavana feno fahasahiana ny Blue Ventures: miasa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ranomasimbe maneran-tany sy hanatsara ny fiveloman'ireo vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana ho an'ny taranaka ho avy. Mino ny herin'ny mpanjono madinika izahay hanova ny fiarovana ny morontsiraka, ary hametraka azy ireo ho ivon'ny zavatra rehetra ataonay.
Miandrandra ny fanohanana ny IYAFA 2022 izahay, ary hizara tantara sy hanamafy ny feon'ny mpanjono mandritra ny taona.
Vakio ny tantaran'ny mpanjono, mpiompy trondro ary mpiasan'ny trondro manerana izao tontolo izao:
Hihaona amin'ny tantsaha: fiompiana trondro anaty profil
Ity andiana mombamomba ity dia mikaroka ny fiompiana akoho amam-borona amin'ny alalan'ny maso sy ny tenin'ireo mpanjono Vezo eto Madagasikara.
Vakio ny tantaran'ny mpanjono manerana izao tontolo izao rehefa mizara ny fomba fijeriny ny fiainana miaraka amin'ny ranomasina miova izy ireo.
Vehivavy amin'ny jono
Fampahafantarana ny andian-dahatsoratra momba ny vehivavy miasa amin'ny fitantanana ny jono sy ny fiarovana ny ranomasina, ao amin'ireo fikambanana miara-miasa aminay any Indonezia.